मर्नुभन्दा अघि फेरि अर्को चमत्कार गर्ने प्रचण्डको घोषणा – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ जेष्ठ १ गते प्रकाशित, l १७:३७
‘समाजवादका लागि नयाँ विचारको विकास गर्नुपर्छ’
काठमाडौं, १ जेष्ठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादका लागि नयाँ विचारको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । युवा सङ्घ, नेपालको स्थापना दिवसमा आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ’ ।
सही विचार कुनै अमुर्त वस्तु होइन, यो कल्पनामा आउने कुरा पनि होइन । वर्गसङ्घर्ष, उत्पादनका निम्ति सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगबाट नै सही विचार आउँछ । मेरै विचार ठीक अरुको गलत भन्ने मानसिकताले हामी ठीक ठाउँमा पुग्दैनौं । अब युवाहरुले समाजवादका निम्ति वैचारिक बहस र सङ्घर्ष गर्ने बेला आएको छ ।’
अध्यक्षले युवाहरुमा अध्ययनप्रति घट्दो रुचिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभया े। उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला हामीमा निकै ठूलो उत्साह हुन्थ्यो । हामी वैचारिक, राजनीतिक अध्ययनप्रति निकै रुचि राख्थ्यौं । विचार निर्माणमा, संगठन निर्माणमा अध्ययनको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, आजभोलि युवाहरुमा अध्ययनप्रति रुचि घटेको देख्दा चिन्ता लाग्छ । अध्ययन गर्न, मेहेनत गर्न किन रुचि घट्दैछ ? अध्ययनको संस्कृति कता हरायो ? यतातिर युवाहरुले सोच्नुपर्छ ।’
२०७६ जेष्ठ १ गते सम्पादित l १७:४०